Sun, Sep 23, 2018 | 07:59:10 NST
नासाको यान मंगलग्रहणमा सफल अवतरण
साउन २२ – अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्था नासाले पठाएको यान मंगलग्रहमा सफलताका साथ अवतरण गरेको छ । यान अवतरणसंगै अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्था नासाले मंगलग्रहमा मानव जीवनको सम्भावनामा ठूलो उपलब्धि पाएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको वेबसाइट ह्याक
काठमाडौं, साउन २१ – मुलुकको परराष्ट्र सम्बन्धी सूचना तथा जानकारी रहने परराष्ट्र मन्त्रालयको वेबसाइट https://mofa.gov.np ह्याक भएको छ । मन्त्रालयको वेबसाइटको होम युआरएलमा ह्याक गरिएको सन्देश राखिएको छ । सन्देशमा ह्याकरले आफुलाई इन्डोनेशियाली ह्याकरका रुपमा चिनाएको छ ।
एप्पल र श्यामसुङ्गको कानुनी लडाई
साउन १८ - इलेक्ट्रोनिक सामान उत्पादन गर्ने विश्वकै दुई ठुला कम्पनी श्यामसुङ र एप्पलबीच अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा नयाँ कानुनी लडाई सुरु भएको छ । एप्पलको आरोप छ की श्यामसुङले एप्पलको आईफोन र आइप्याडको डिजाइनको नक्कल गरेको छ । तर श्यामसुङ यस आरोपलाई खण्डन मात्र गर्दैन, उल्टो एप्पलले आफ्नो डिजाइन चोरेको आरोप लगाउँछ ।
सरकारले नवीकरणीय उर्जामा दिने अनुदान बढाउने
काठमाडौं, साउन १३ - सरकारले नवीकरणीय उर्जामा दिने अनुदान बढाउने भएको छ । अल्पसंख्यक, दुर्गम क्षेत्रका गरीब नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले अनुदानको निर्धारण गर्ने गरि नयाँ योजना ल्याउन लागेको हो । आर्थिक अवस्था केही बलियो हुनेले नवीकरणीय उर्जाको प्रयोग गरेको तर बास्तविक गरीब लगायत अल्पसँख्यक तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकमा नवीकरणीय उर्जाको पहुँच नपुगेको भन्दै यसअघि दिँदै आएको अनुदान रकम केही बढाउने तयारी सरकारको छ ।
शैक्षिक गुणस्तर बढाउन विद्यालयलाई कम्प्युटर
धादिङ, साउन ९ – विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर बढाउने उद्देश्यले धादिङका २० वटा विद्यालयलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालयले कम्प्युटर प्रदान गरेको छ । मंगलबार जिल्ला शिक्षा कार्यालयले कार्यक्रम गरि धादिङका विभिन्न २० वटा विद्यालयलाई एक एक थान कम्प्युटर र प्रिन्टर हस्तान्तरण गरेको हो ।
सिटिइभिटीको ४५ करोडको भवन निर्माण
भक्तपुर, साउन ५ –प्राविधिक शिक्षा तथा व्यबसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) ले बुटवलमा प्राबिधिक शिक्षा अध्ययनका लागि अत्याधुनिक भवन निर्माण गरेको छ । कोरिया सरकारको करिब ४५ करोड रुपैयाँको सहयोगमा १० विघा जग्गामा निर्माण गरेको भवनमा यसवर्षदेखि मेकानिकल, ईलेक्ट्रिकल ईलेक्ट्रोनिक्स र अटोमोवाईल विषयमा पढाइने सिटिइभिटीका निर्देशक विष्णु कोइरालाले बताउनुभयो । तीनवर्षे डिप्लोमा तहको अध्ययन हुने यस इन्ष्टिच्युटमा प्रत्येक संकायमा ४८ जनाको दरले पढाई संचालन हुने भएको छ । प्राबिधिक शिक्षा तर्फको...
१३ वर्षपछि गुगल छोडेर याहुमा
साउन २ – इन्टरनेट कम्पनी याहुले गुगलमा १३ वर्षदेखि कार्यकारी पदमा कार्यरत मारिसा मायरलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरेको छ । मायर गुगलकी प्रवक्ता थिइन् ।
फेसबुक लाइकका लागि खर्चिएको रकम 'बालुवामा पानी'
साउन १ - फेसबुक प्रयोगकर्ताले कुनै कम्पनी वा त्यसको उत्पादनमा लाइक गरेपनि ती कम्पनी र उत्पादनमा उनीहरुले खासै इच्छा नदेखाएको पाइएको छ । कम्पनीहरुले फेसबुकमा आफ्नो उत्पादनका लागि लाइक हासिल गर्न धेरै रकम लगानी गरे पनि उपभोक्ताहरुको त्यसमा कुनै इच्छा नदेखाएपछि त्यो लगानी 'बालुवामा पानी' जस्तै भएको भएको छ ।
च्याटमा जथाभावी कुरा गर्ने होसियार!
असार २९ – एक अधवैँशे पुरुष १३ वर्षिया वालिकासँग फेसबुकमा च्याट गर्दै थिए । अमेरिकाको दक्षिणी फ्लोरिडाकी यि वालिकासँगको च्याटमा ति पुरुषले यौनजन्य कुराकानी गर्दै थिए र भोलिपल्ट विद्यालय समयपछि भेट्न वालिकालाई सहमत गराएका थिए । तर समय वालिकामाथि कुदृष्टि राख्ने ति पुरुषले सोचेजस्तो भएन ।
गुगल २ करोड २५ लाख डलर जरिवाना तिर्न तयार
असार २७ - गुगलले एक मुद्दा अन्त्य गर्न २ करोड २५ लाख अमेरिकी डलर जरिवाना तिर्ने भएको छ । एप्पल सफारी नामक वेभ ब्राउजरमा निर्भर इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको गोपनियता भङ गरेको आरोपमा गुगलले यो जरिवाना तिर्नु परेको हो । तर एसोसिएट प्रेसका अनुसार यो निर्णयका बारेमा फेडेरल ट्रेड कमिसन (एफटिसी)ले सहमति जनाउन अझै बाँकी छ । कमिसन अमेरिकामा अनलाइन गोपनियताका बारेमा काम गर्ने एक मात्र संस्था हो ।
विश्वका केही कम्प्युटरमा इन्टरनेट बन्द हुन सक्ने
असार २५ - ह्याकरहरुले फैलाएको भाइरसलाई हटाउने काम हुने भएका कारण सोमवार केही देशका केही कम्प्युटरमा इन्टरनेट सेवा बन्द हुन सक्ने छ । भाइरस हटाउनका लागि अमेरिकी अनुसन्धान संस्था एफबिआईले सर्वर बन्द गर्ने भएका कारण केही देशका केही कम्प्युटरमा इन्टरनेट नचल्ने भएको हो । एफबिआइले छिटो नै इन्टरनेट सुविधा पुन प्रदान गर्ने आश्वासन इन्टरनेट सुविधा दिने कम्पनीलाई दिएको छ ।
फेसबुक र याहुबीच सुल्झियो बिबाद
असार २३ – विश्वको सबैभन्दा ठुलो सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र चर्चित मध्यको एक सर्च इन्जिन याहु बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार (प्याटेन्ट राइट) को बिबाद सुल्झाउन सहमत भएका छन् ।
गण्डकी र धौलागिरीमा छिट्टै आइपी सिडिएमएको इन्टरनेट
पोखरा, असार २० – गण्डकी र धौलागिरी अञ्चलका सिडिएमए तथा स्काई फोनका उपभोक्ताले छिट्टै उच्च गतिको ईन्टरनेट चलाउन पाउने भएका हुन् । नेपाल टेलिकम पोखराले सिडिएमए प्रविधिबाट उच्च गतिमा ईन्टरनेट चलाउन सकिने आइपी सिडिएमए प्रविधि जडान अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ ।
समलिंगी बिबाहका लागि फेसबुकमा छुट्टै आइकन
असार १९ – सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले समलिंगी बिबाह गर्ने जोडीका लागि आफ्नो टाइमलाइनमा बैबाहिक सम्बन्ध देखाउन छुट्टै आइकन सार्वजनिक गरेको छ । अब यो आइकन मार्फत यस्ता जोडीले आफ्नो सम्बन्ध टाइमलाइनमा देखाउन सक्नेछन् ।
क्यान काभ्रेको अध्यक्षमा कैलाश
काभ्रे, असार १७ - कम्प्युटर एशोसियसन अफ नेपाल क्यान काभ्रेको विशेष साधारण सभाले कैलाश पलाञ्चोकेको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ । कम्प्युटर एशोसियसन अफ नेपाल (क्यान) काभ्रेको विशेष साधारण सभा तथा छैठौं अधिवेशनले पलाञ्चोकेको नेतृत्वमा उपाध्यक्षमा जयराम हुमागाईं, महासचिव नवराज भुर्तेल, सचिव दिपक बस्नेत र कार्यसमिति सदस्यमा पवनराज कर्णजित, सुशन राजवंशी, रामचन्द्र न्यौपाने र श्रवणराज आचार्यलाई निर्विरोध चयन गरेको हो ।
सोसल मिडिया डे मनाइँदै
काठमाडौं, असार १६ – आज विश्वभर सोसल मिडिया डे मनाइँदै छ । इन्टनेट प्रविधिको विकाससँगै आएको डिजिटल क्रान्तिको सम्झनामा सोसल मिडिया सम्बन्धी ब्लग म्यासेबलले सन् २०१० देखि यो दिवस मनाउन थालेको हो । दिवसका अवसरमा विश्वभर विभिन्न कार्यक्रमहरु आयोजना गरिएको छ । सोसल मिडिया डे मनाउन काठमाडौंमा पनि ‘सोसल मिडिया डे मिट्सअप’को आयोजना गरिएको छ । कार्यक्रममा नेपालमा सोसल मिडियाको उपयोगिता, यसका राम्रा नराम्रा पक्ष र अहिलेका चर्चित नेटवर्कको प्रयोगका बारेमा छलपल गरिने आयोजक मध्येका एक आकार...
ब्ल्याकबेरीले ५ हजार कर्मचारी कटौती गर्ने
असार १५ – कम्पनी घाटामा गएपछि मोबाइल कम्पनी ब्ल्याकबेरीले ५ हजार कर्मचारी कटौती गर्ने भएको छ । क्यानाडामा रहेको ब्ल्याकबेरी मोबाइल बनाउने कम्पनी रिसर्च इन मोशन (आरआईएम) का अनुसार कम्पनी पहिलेको तुलनामा झण्डै आधाजसो घाटामा गएको छ ।
ओखलढुङ्गा, असार १४ - घरपरिवारबाट झण्डै ३० वर्ष सम्पर्कविहीन भएका बलखु गाविस – ७ का भरत धमला फेसबुकको माध्यमबाट परिवारको सम्पर्कमा आउनु भएको छ । धमला घर छाडेर हिँडेको २७ वर्षपछि फेसबुककै सहाराले आफन्तको सम्पर्कमा आउनु भएको हो । बलखुस्थित मामा घरमा जन्मेर १८ वर्षसम्म त्यहीँ हुर्किएका धमला २०४२ सालमा घर छाडेर हिडनु भएको थियो ।
अनलाइनमा ‘लिभिङ विथ आइसिटी’
काठमाडौं, असार ९ – बिराटनगरबाट प्रकाशित सूचना प्रविधि मासिक पत्रिका लिभिङ विथ आइसिटी काठमाडौंबाट प्रकाशित हुने भएको छ । पत्रिकाले लिभिङ विथ आईटी डटकम नामक अनलाईन पोर्टल पनि सुरु गरेको छ ।
‘७० प्रतिशत नेपाली पत्रकार फेसबुकमा, ट्वीटर र युट्युवमा ५० प्रतिशत
काठमाडौं, असार ७ – नेपालका कति पत्रकारको फेसबुकमा पहुँच होला ? नेपाल पत्रकार महासंघले गत बैशाखमा गरेको सोसल मिडिया सर्भेक्षण २०१२ ले झण्डै ७० प्रतिशत पत्रकारले फेसबुक चलाउने गरेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ ।
काठमाडौ, असार ७ – आज २१ जुन । सामान्यतः आजको दिन पृथ्वीमा दक्षिणी गोलाद्र्धमा दिन छोटो र उत्तरी गोलाद्र्धमा दिन लामो हुने गर्छ । नेपालमा सूर्योदय र सूर्यास्तको बीचको समय अनुसार बिहीबारको दिन झण्डै १४ घण्टाको हुनेछ ।
सुचना अधिकारीलाई व्यवस्थापन तालिम
एलबी थापा/उज्यालो । प्यूठान, असार ५ - प्यूठानमा कार्यरत सुचना अधिकारी र पत्रकारहरुका लागि सुचना ब्यवस्थापन सम्बन्धी तालीम दिइएको छ । तालिम बिभिन्न विषयगत कार्यालयका सुचना अधिकारी, राजनीतिक दलका प्रबक्ता, गैर सरकारी संस्थाका फोकल पर्सन, प्रहरी र पत्रकारहरुलाई दिइएको हो । युथ मिडिया डेभलपमेन्ट सेन्टर नेपालको आयोजना र जिल्ला विकास समिति प्यूठानको आर्थिक सहयोगमा उनीहरुका लागि तालिम दिइएको हो ।
जो फेसबुकमा चर्चित छन्
जेठ ३२ - सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले सार्वजनिक गरेको सर्वाधिक चर्चित रहने सेलिबे्रटीहरुको सूचिमा गायक गायिकाहरुको बर्चश्व रहेको छ । विश्वप्रशिद्ध र्‍यापर इमिनेम ५ करोड ४६ लाख लाइकका साथ पहिलो स्थानमा छन् । दोस्रो स्थानमा २४ वर्षिया गायिका रिहाना छिन् । रिहानाको पेजमा इमिनेमभन्दा १२ लाखकम अर्थात ५ करोड ३४ लाख जनाले लाइक गरेका छन् ।
नोकियाले १० हजार कर्मचारी कटौति गर्ने
जेठ ३२ – मोबाइल फोन उत्पादक कम्पनी नोकियाले सन् २०१३ को अन्त्यसम्ममा १० हजार कर्मचारी कटौति गर्ने घोषणा गरेको छ । नोकियाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत स्टेफेन इलोपद्वारा जारी विज्ञप्तीमा फिनल्याण्ड, जर्मनी तथा क्यानडामा रहेका फ्याक्ट्रीहरु बन्द गरिने उल्लेख छ ।
जनगुनासो सुन्न एसएमएस सेवा
नेपालगञ्ज,जेठ २५ – कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा गतबर्ष कमजोर मानिएको नेपालगञ्ज नगरपालिकाले यस वर्षदेखि एसएमएसबाट नै जनगुनासो सुन्ने व्यवस्था मिलाएको छ । प्रशासकिय अधिकृत मोहल हमाललाई गुनासो सुन्ने अधिकारी तोकेर नगरपालिकाले एसएमएसमार्फत पनि गुनासो सुन्ने व्यवस्था मिलाएको हो ।
देखियो दुर्लभ खगोलिय संयोग ‘भेनस ट्रान्जिट’
काठमाडौं, जेठ २४ – शुक्र ग्रहको छाँया सूर्यमा पर्ने दुर्लभ खगोलिय संयोग भेनस ट्रान्जिट अहिले देखिएको छ । पृथ्वी, शुक्र र सूर्य एउटै सरल रेखामा पर्दा शुक्र ग्रहको छाँया सूर्यमा पर्दा भेनस ट्रान्जिटको अवस्था देखिन्छ ।
कसरी हेर्न सकिन्छ शुक्र–सूर्य गमन ?
काठमाडौं, जेठ २३ - वुधवार विहान काठमाडौंमा सूर्य उदाउँदा ५ बजेर ८ मिनेटमा सूर्य उदाउँदा सूर्यमा कालो धब्बा देखिने छ । तर यो सूर्यग्रहण भने होइन । सूर्य र पृथ्वीको बीचमा शुक्र ग्रह परेपछि देखिने यो दृष्य ८ वर्षअघि पनि देखिएको थियो । यस्तो दृष्य अबको १ सय ५ वर्षपछि मात्र देखिने खगोल विद्हरुले बताएका छन् ।
जेठ २० – यो तपाईँको लोकतान्त्रिक अधिकार प्रयोग गर्ने बेला हो । तर मतपेटिकामा हैन फेसबुकमा । विश्वकै ठुलो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले आफ्ना प्रयोगकर्तालाई फेसबुकको अबको गोपनीयता नीति के हुने भन्ने बारे आफ्नो मत व्यक्त गर्न आग्रह गरेको छ ।
विकिलिक्स संस्थापक असान्जले मुद्दा हारे
जेठ १७ – विकिलिक्सका संस्थापक जुलियन असान्जले सुपुर्दगी बिरुद्ध दायर मुद्दा हारेका छन् । आफुलाई स्वीडेनमा सुपुर्दगी गर्न जारी वारेन्ट गैरकानूनी भएको भन्दै असान्जद्वारा दायर मुद्दामा फैसला गर्दै बेलायतको सर्वोच्च अदालतले उनको जिकिर अस्वीकार गरेको हो ।
सावधान ! फेसबुककै कारण जेल परिएला
रोसन पुरी/उज्यालो, काठमाडौं, जेठ १७ - तपाईको फेसबुकलगायत सामाजिक संजालमा कसैलाई अपमानित गरेर कसैले फोटो वा अरु सामग्री ट्याग गरिदिएको छ भने आजै हटाइहाल्नुस् । नत्र अरुले रमाइलोका लागि तपाईको फेसबुकको वालमा ट्याग गरिदिएको फोटो वा सामग्रीका कारण तपाई जेल जानुपर्ने पनि हुन सक्छ ।
आइपुग्यो फेसबुकको क्यामेरा एप्लिकेसन
जेठ १२ – गत अप्रिलमा फोटो सेयर एप्लिकेसन इन्स्टाग्रामका लागि एक बिलियन अमेरिकी डलर खर्चिन तयार भएको फेसबुकले आफ्नै क्यामेरा एप्लिकेसन सार्वजनिक गरेको छ । बिहीबार सार्वजनिक गरिएको यो आइफोन एप्लिकेसनमार्फत एकैपटक धेरै तस्बिर सेयर गर्न सकिने कम्पनीका उत्पादन प्रवन्धक डिर्क स्टुपले बताएका छन् ।
रिमोर्ट आविष्कारकको निधन
जेठ १०– टेलिभिजनको रिमोर्ट आविस्कार गर्ने इयूजीन पोलीको ९६ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । इयूजीनले सन् १९५५ रिमोट कन्ट्रोलको अविष्कार गर्नुभएको थियो ।
खबरदार! फेसबुक च्याटमार्फत फैलिँदैछ कम्प्युटर भाइरस
जेठ ९ – यदि तपाईँ फेसबुक च्याटमा रमाउन खुब मन पराउनुहुन्छ भने साबधान हुनुहोस् । फेसबुक च्याट म्यासेन्जर मार्फत एउटा नयाँ खतरनाक कम्प्युटर भाइरस चारैतिर फैलिँदै छ । इन्टरनेट सुरक्षासम्बन्धी विज्ञको समूह ट्रेड माइक्रोले नयाँ भाइरस पत्ता लगाएको डेलिमेलको इनटरनेट संस्करणले जनाएको छ ।
खण्डग्रास सूर्यग्रहण देखियो
जेठ ८ – नेपालको पूर्वी भागमा सोमबार खण्डग्रास सूर्य ग्रहण देखिएको छ । बिहान सूर्यदयको समय अर्थात ५ बजेर २ मिनेट देखि झण्डै ४ मिनेट खग्रास सूर्य ग्रहण देखिएको हो ।
पाकिस्तानमा ट्वीटरमाथि प्रतिबन्ध
जेठ ७ – पाकिस्तानमा माइक्रो ब्लगिङ साइट ट्वीटर माथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । ईस्लाम विरोधी गतिविधि प्रचार गरिएको भन्दै ट्वीटर माथि प्रतिबन्ध लगाइएको बिबिसीले जनाएको छ ।
फेसबुक कुन देशका मान्छेले धेरै चलाउँछन् ?
काठमाडौं, जेठ ५ – सन् २००४ को फेब्रुवरीमा सुरु भएको सामाजिक सञ्जाल फेसबुकका विश्वभर कति प्रयोगकर्ता होलान? दुई–चार लाख, दुई–चार करोड वा त्यो भन्दा पनि बढी?
फेसबुक प्रयोगकर्ताको मुल्य मात्र १ डलर !
जेठ ४ – तपाईँको जीवनमा फेसबुकको महत्व र मुल्य कति छ ? सायद एउटा मिलनसार साथी जत्तिकै । आफ्नो नेटवर्कमा रहेकासँग निरन्तर सम्पर्क गर्न र नयाँ नयाँ मानिससँग सम्बन्ध स्थापित गर्न फलदायी फेसबुकको मुल्य मापन गर्न मुस्किल छ ।
दूरसञ्चार दिवश मनाइदै
काठमाडौ, जेठ ४ – विश्व दूरसञ्चार दिवस बिहीबार नेपालमा पनि बिभिन्न कार्यक्रम गरी मनाईंदैछ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको महत्वलाई विश्वभर उजागर गर्ने उदेश्यले यो दिवस मनाउन थालिएको हो ।
बन्दै छ स्टिभ जब्सको जीवनमा आधारित चलचित्र
काठमाडौं, जेठ ३ – एप्पलका पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय स्टिभ्स जब्सका बारेमा चलचित्र निर्माण हुने भएको छ । फेसबुकबारे बनेको चलचित्र ‘द सोसल नेटवर्क’ का लागि ओस्कार अवार्ड विजेता लेखक आरोन बेन्जामिन सोरकिनले जब्सको जीवनमा आधारित चलचित्र लेख्न अनुवन्धन पत्रमा हस्ताक्षर गरेको सोनी पिक्चर्सले जनाएको छ ।